कांग्रेस प्रदेश दुईमा केन्द्रित हुने - Karobar National Economic Daily
कांग्रेस प्रदेश दुईमा केन्द्रित हुने
query_builderJuly 25, 2017 8:48 AM supervisor_accountजगन्नाथ दुलाल visibility168
काठमाडौंः नेपाली कांग्रेस असोज २ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रदेश नं. २ मा केन्द्रित हुने भएको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा ३ दिनसम्म बसेर सोमबार राति सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले प्रदेश २ को निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको हो ।
व्यवस्थापिका संसदको पहिलो दल भए पनि स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न ६७ जिल्लामा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ । कांग्रेसले प्रदेश २ ले अन्य जिल्लाको क्षतिपूर्ति गर्ने र कांग्रेस पुनः पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
“प्रदेश २ को निर्वाचनमा सहभागिताका लागि सबैलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरियो,” बैठकपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले भने, “समृद्ध मधेस र अधिकारसम्पन्न मधेसी समुदायका लागि कांग्रेसलाई मतदान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।”
निर्वाचन सम्पन्न जिल्लामा हारका कारणको समीक्षा गर्दै अब हुन बाँकी स्थानीय तह निर्वाचनमा जित्नेगरी अघि बढ्नेबारे बैठकमा गम्भिर समीक्षा भएको पनि उनले बताए ।
त्यस्तै, बैठकले व्यवस्थापिका संसदमा रहेको संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले बताए । “प्रदेश २ को निर्वाचनअघि नै संशोधन विधेयक अघि बढाउन निर्णय भएको छ,” नेता गुरुङले कारोबारसँग भने, “त्यस्तै स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।”
कांग्रेसले संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्न नेकपा एमालेलाई आग्रह पनि गरेको छ । सरकारले प्रदेश नं. २ मा २४ वटा स्थानीय तहको संख्या बढाउने गरी गरेको निर्णय अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मधेस केन्द्रित दलले स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएका ६७ वटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहको पार्टीको प्रतिवेदनसमेत मागेको छ । १५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न भएका जिल्लाले निर्वाचनको सम्पूर्ण समीक्षात्मक टिप्पणीसहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाइसक्न निर्देशन दिइएको छ ।
निर्वाचनमा अन्तरघात भएको भन्दै कारबाहीका कुरा उठिरहेका बेला छानबिन गर्न र पार्टीको अवस्था कमजोर भएका ठाउँमा संगठन सुदृढीकरणका लागि यस्तो प्रतिवेदन माग गरिएको हो ।
बैठकमा पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्न र निर्वाचनमा अन्तरघात रोक्न अनुशासन समिति तत्काल गठन हुनुपर्ने आवाज केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका थिए । तर, अनुशासन समिति बन्न नसकेपछि छिट्टै छलफल गरेर पछि बनाउने टुंगोमा बैठक पुगेको छ ।
ढिलोमा भोलि मन्त्रिपरिषद् विस्तार : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ढिलोमा भोलि (बुधबार) मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका छन् । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका उनले सोमबार केन्द्रीय समिति बैठकमा बुधबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका हुन् ।
मन्त्रीको संख्या कम हुने र आकांक्षी धेरै हुने हुँदा मन्त्री नपाउनेलाई नरिसाउन पनि उनले आग्रह गरे । “आकांक्षी धेरै छन् । सबैको पालो आउँछ ।
नपाउनेले नरिसाउनुहोला,” बैठकमा उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले कारोबारसँग भने, “छिटोमा मंगलबार ढिलोमा बुधबारसम्ममा विस्तार हुन्छ । अहिले नपाउनेको पछि पालो आउँछ ।” देउवा गत जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए ।
स्थानीय तह नेपाली कांग्रेस निर्वाचन